FAV POLIO : Nanome ohatra ny zanaky ny mpiasan’ny fahasalamana sy zanaky ny ben’ny tanàna
Tonga maro tao amin’ny hopitaly Mahabibo ny mpiasan’ny fahasalamana manan-janaka latsaky ny 5 taona eto Mahajanga, ny alarobia teo haneho amin’ny rehetra fa ny zanak’izy ireo no anisan’ny lohalaharana atao vaksiny fanefitry ny lefakozatra. 7 décembre 2017
Nanome toky ihany koa ny ben’ny tanàna fa hitondra ny zanany hatao vaksiny. Tanterahina eto Mahajanga nanomboka omaly alarobia ny hetsika vaksiny polio ary tsy ho tapitra raha tsy ny zoma izao. Ny tanjona dia ny hahavita vaksiny ny 95% ny zaza latsaky ny 5 taona eto Mahajanga amin’ity Fav Polio andiany faha-11 ity. 92% ny zaza no vita vaksiny tamin’ny hetsika fanaovam-baksiny farany natao tamin’ny volana marsa teo.
Ny sakana matetika dia tsy manaiky ny hanaovana vaksiny ny zanany noho ny tsaho isankarazany miely momba io vaksiny io. Eo ihany koa ny ahiahin’ny ray aman-dreny sasany amin’ny mety tsy fahombiazan’ny fanefitra. Manoloana izany dia nisafidy ny hanazava ny saim-bahoaka ny mpiasan’ny fahasalamana ka misy ny fandaharana isankarazany atao amin’ny radio sy fahitalavitra ka ny lehibe indrindra dia ny fandaharana mivantana tao amin’ny M3Tv nahafahan’ny vahoaka nandray anjara tamin’ny fametrahana fanontaniana amin’ny alalan’ny antso antariby.
Nampahafantarina tamin’izany fa raha misy zaza iray voan’ny polio dia mety mamindra amin’ny zaza 200 manodid ina azy. Isaky ny misy trangana polio dia tsy maintsy misy hetsika fanaovam-baksiny faobe telo farafahakeliny atao aorian’izay. Tamin’ny taona 2015 iny anefa dia nisy zaza roa voan’ny aretina lefakozatra tao amin’ny fokontany Tsararano. Ilaina ny fanaovam-baksiny satria raha vao tratra ny zaza dia tsy avotra intsony mandra-maty. Indroa isan-taona ny hetsika fanaovam-baksiny. Ny volana marsa teo no farany teto Mahajanga ary tokony natao ny volana oktobra teo ny hetsika faharoa tamin’ity taona ity saingy tsy maintsy nahemotra noho ny valanaretina pesta.